Snapchat wuxuu dhigayaa wajiyo cusub iyo qiiro, maxay ula jeedaan? | War gadget
Snapchat waxaa lagu cusbooneysiiyay horumarin xiiso leh
Paul Aparicio | | Mobiles, Noticias, shabakadaha bulshada
Codsiga fariinta degdega ah iyo “gaar ahaaneed” Snapchat hadda waa la cusbooneysiiyay iyada oo la adeegsanayo horumarinno suurtagal ah, iyaga ka mid ah waxaan ka helaynaa calaamado cusub oo si wanaagsan loogu aqoonsado xiriiradayaga, qayb cusub oo loo yaqaan "Jacayl Baahan" (Habeen jacayl) iyo habeyn loogu talagalay kamaradda.
Snapchat ayaa dhawaanahan si xoog leh u soo jiitamayay, laga bilaabo markii la soo jeediyay in la joojiyo macaamiisha saddexaad ee si lama filaan ah u jabiyay nimcada Snapchat ee awood u leh inay xaddido xakamaynta waxa aad dirto, labadaba sheekaysiga iyo feylasha badan iyo taas oo u oggolaanaysa (ama u oggolaanaysa) si loo badbaadiyo feylashaas iyo xitaa taariikhda wada hadalka.
1 Micnaha Snapchat emoticons
2 Wejiga dhoola cadeynta
3 Wejiga dhoola cadeynta
4 Ku waji muraayadaha indhaha
5 Weji yar oo dhinac u jeeda
6 Qalbi Dahab ah
8 Waxyaabaha kale ee cusub ee cusbooneysiinta Snapchat
Micnaha Snapchat emoticons
Snapchat wuxuu bilaabay inuu xannibo macaamiisha dhinac saddexaad waqti dheer kahor, waa wax xaqiiqdii aysan si fiican u arkin isticmaaleyaal badan. Waxaa laga yaabaa in lagu magdhabo dhaqdhaqaaqan, arjiga ayaa hadda la cusbooneysiiyay ku dhowaad sanad ka hor oo leh warar xiiso leh. Kuwaas waxaa ka mid ah riwaayado laga yaabee inuu jiray mid ka sarreeya kuwa kale: qaar dhoola cadeyn cusub Snapchat u eg emoji oo u muuqda soo socda falanqeynta sheekooyinka. Laakiin waa maxay wejiyadahan yar iyo astaamaha kale? Hagaag, inkasta oo ay u badan tahay inaad horeyba u taqaanay iyaga oo aad garaneyso macnahooda, waxaan kuugu sharaxi doonaa hoosta.
Wejiga dhoola cadeynta
Haddii aan aragno weji dhoolacadeyn ah oo ku xiga mid ka mid ah xiriiradayada, waxay ka dhigan tahay in xiriirkan uu yahay mid ka mid ah saaxiibbadayada ugu fiican Snapchat, laakiin ma ahan kan ugu fiican dhammaan. Maaddaama ay jirto hal meel oo keliya oo loogu talagalay kan ugu fiican, saaxiibkan waxaa laga yaabaa inuu noqdo kan labaad, saddexaad ama ka badan, laakiin, illaa aan sii wadno inaan la sheekeysanno isaga ama iyada oo aan u beddeleyno astaantiisa qalbiga dahabka ah, isagu ma ahan kan ugu .
Snapchat-ka waxaan ku leenahay laba nooc oo wajiyo dhoola cadeynaya: mid caqli badan oo kaliya afka oo qalooca indhuhuna xidhan yihiin iyo mid kale oo aad u muujiya indhaha oo furan oo ilkuhu ka muuqanayaan. Haddii aan aragno mid labaad oo ka mid ah dhoolla caddayntan kor ku xusan mid ka mid ah xiriiradayada, taas macnaheedu waa taas saaxiibkayaga ugu fiican lambarka 1 waa saaxiibkiisa ugu fiican lambarka 1.
Ma ahan wajiga ugu fudud ee la arko, maxaa yeelay haddii aan haysto saaxiib la yiraahdo Vicente oo ah saaxiibkeyga ugu fiican lambarka 1, Vicente sidoo kale waa inay noqotaa saaxiibka ugu fiican saaxiib saddexaad oo la yiraahdo Andrés, marka Vicente waa inay lahaataa laba saaxiib oo ugu fiican lambarka 1.
Ku waji muraayadaha indhaha
Haddii aan ku aragno wejiga muraayadaha indhaha oo ku xiga mid ka mid ah xiriiradayada, macnaheedu maahan in xiriirkan uu ka socdo aag ay aad u qorax badan tahay, maya. Waxa loola jeedo waa taas mid ka mid ah asxaabtayada ugu fiican waa mid ka mid ah asxaabtiisa ugu fiican. Tusaale ahaan, waxaan xiriir la leeyahay Pepe oo ka mid ah asxaabteyda ugu fiican (wuxuu noqon karaa kan ugu fiican, laakiin maahan haddii saaxiibkaa uu yahay kan ugu fiican labadaba, oo ay u taalo astaan ​​kale). Waxaan ku leeyahay saaxiib kale Snapchat oo la yiraahdo José. Hagaag, hadii Pepe uu yahay mid kamid ah saaxiibada ugu fiican José, waxaan arki doonaa astaamaha wajiga oo leh muraayadaha indhaha ee sheekada José, José wuxuu arki doonaa emoji wajiga oo leh muraayadaha muraayadaha dusha sare ee sheekadayda, Pepe ma uusan arki karin wax astaan ​​ah mana arki karin mid ka mid ah oo jaleeca dhinaca, oo macnahiisa aan sidoo kale gadaal ka sharixi doonno.
Weji yar oo dhinac u jeeda
Emoji-kan waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa xaalado badan oo dabeecado kala duwan ah. Waxay noqon kartaa wax la mid ah "waan ku arkay", waxay noqon kartaa "haa, haa ..." ama xitaa inaad jeceshahay qofka aad u direyso. Nasiib wanaagse, Snapchat macnihiisu aad buu u cad yahay: haddii aan aragno weji dhinac dhinac u fiirinaya oo ku xigta mid ka mid ah xiriiradayada, waxay ka dhigan tahay waxaan nahay saaxiibkaaga ugu fiican, laakiin asaga ama iyadu ma ahan kuwayaga. Tusaale ahaan, haddii aan inbadan la hadlay saaxiibkay Pepa oo Pepa aanu Snapchat-ka qof kale la sawiran, waxaan noqon doonaa mid ka mid ah asxaabteeda ugu fiican. Laakiin haddii aan inbadan Snapchatted la yeelanay qof kale, waxaan yeelan doonnaa mid kale ama saaxiib kale oo ugu fiican. Xaaladdan oo kale, waxaan arki doonnaa weji u muuqda mid ka baxsan sheekada Pepa iyo Pepa wuxuu arki doonaa weji dhoola cadeynaya.
Qalbi Dahab ah
Haddii aan ku aragno qalbi dahabi ah sheekada mid ka mid ah xiriiradayada, waxaa loo maleynayaa inaan xiriir wanaagsan ku leenahay Snapchat qofkaas. Qalbiga dahabka macnihiisu waa annaga waxaan nahay saaxiibkaaga kuugu dhow lambarka 1 qofkaasina waa saaxiibkeena ugu fiican nambarka 1. Waxay dhahaan qofkii saaxiib leeyahay wuxuu leeyahay hanti, sax? Hagaag, hantidaas waxaa lagu matalayaa Snapchat oo leh qalbi dahabi ah emoji.
El ololka icon Waxaan dhihi karnaa adoo adeegsanaya muujinta Anglo-Saxon in xilligan aan "dab ku jirno" qofkaas. Isboortiga sida kubbadda koleyga, gaar ahaan haddii ay tahay NBA maxaa yeelay waxaa lagu ciyaaraa dal ku hadla af Ingiriiska, marka ciyaaryahan uu toogto dhowr jeer oo isku xigta oo uu goolal dhaliyo, waxaa la yiraahdaa wuxuu ku jiraa "dab", oo turjumaaddiisa tooska ah ay tahay "on" laakiin waxaan adeegsan doonnaa ereyga "ku xiran". On Snapchat, haddii aan aragno ololka ka sarreeya sheekada mid ka mid ah xiriiradayada, waxay ka dhigan tahay inaan "ku xirnay" xiriirkaas, macnaha waanu qabsanay asaga ama ayada (farriimaha la diray iyo kuwa la helay) intii lagu jiray dhowr maalmood oo isku xigta. Caqli ahaan, sida qulqulka oo dhan, ololku wuu baxayaa haddii aan joojino la sheekaysiga xiriirkaas.
Waxyaabaha kale ee cusub ee cusbooneysiinta Snapchat
Marka lagu daro astaamaha Snapchat ee aan soo sheegnay, waxaa sidoo kale jira horumarin dhanka kamaradda ah oo hadda a astaanta bilaha ee ku xigta badhanka birta, adoo riixaya waxay ka dhigi doontaa kamaraddeena inay sare u qaado dareenka ISO si ay u qabato sawiro cad xaaladaha iftiinka yar, in kasta oo ay tahay inaynu ka warqabno inay taasi horseedayso luminta tayada natiijada, iyadoo ka tagaysa buuq badan sawirka:
Ugu dambayntiina waxaan yeelan doonnaa qayb cusub oo la yiraahdo «Waxay u baahan yihiin jacayl» kaas oo xiriirada ay ka muuqan doonaan cida aan u diri jirnay boobka laakiin sabab kasta ha noqotee waan joojinay sameynta.
Inta udhaxeysa tan iyo Snapchat cabirka cusub ee loogu talagalay xannibo isticmaalka barnaamijyada dhinac saddexaad oo sidaas looga fogaado in waxyaabaha u gaarka ah isticmaaleyaashooda ay wax u dhintaan, dalabka iyo adeegtuna ay qaadanayaan koorso wanaagsan, iyo inay iyaguba dookh guul leh yihiin marka la eego dirista sawirrada, si ka duwan Whastapp, dadkani way ogyihiin in joogidda ugu sarreysa ay xambaarsan tahay a mas'uuliyad weyn, waxayna la shaqeynayaan astaamo cusub oo nagu dhiirrigelinaya inaan sii wadno adeegsiga codsigooda, astaamo cusub oo lagu daro kuwii dhowaan la soo bandhigay, sida qaybta «Baro», halkaas oo aan ka arki karno sheekooyinka yaryar ee ka socda kanaallada adduunka laga aqoonsan yahay sida National Geographic.
Marka la eego adeegsiga barnaamijyada dhinac saddexaad, cid kastoo hadda isku dayda, waxay u badan tahay inay helaan qalad sheegaya in aysan awood u lahayn inay ku xirmaan serverka, haddii ay dhacdo inaan la helin waa arrin uun Waqtiga ka dib, Snapchat wuxuu dib ugala laabanayaa marin u helkooda server-yadooda codsiyada noocan ah ee aan rasmiga ahayn, oo si weyn noo anfaca.
Tan iyo markii macluumaadka sirdoonka NSA la daabacay, waxaan si aad ah iyo aad u badan u isticmaalnaa kuwa u fiirsada waxyaabahayaga gaarka ah. Marka la eego codsiyada farriimaha, in kasta oo WhatsApp ay sii waddo inay suuqan gacanta ku hayso, haddana waxaan sidoo kale raadineynay ikhtiyaarro noo ballan qaadaya (in kasta oo ay been noo sheegi karaan) heer aad u sarreeya oo asturnaanta, sida Telegram, oo ka mid ah codsiyada ugu ammaansan ee laga heli karo barxad kasta, ama Snapchat, codsi kale oo aad u ammaan badan oo waliba na siiya hawlo aad u xiiso badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Snapchat waxaa lagu cusbooneysiiyay horumarin xiiso leh
Isticmaalayaasha Windows Phone waxay si weyn uga faa'iideystaan ​​joojinta codsiyada dhinac saddexaad, gaar ahaan sababta oo ah ikhtiyaarka ay si rasmi ah noo siiyeen, oo ah MIDNA oo aan ka qaybgalin dalab kasta oo taageero ah. Ceeb iyo xirfad la’aan. Ma jiro Agaasime Guud oo u oggolaanaya shirkaddiisa in ay xirto suuq, iyo in ka yar kan ay adeegsadayaashu ka ooyaan.
Ku jawaab erik
Wejiga dhiniciisa waxay u badan tahay qofka aad haysato inaad ku helayso qalbiga dahabka ah! J
Ku jawaab Euge
Wejiga dhinac ah macnaheedu waa qofkaas wuxuu kuu yeelanayaa saaxiibbo fiican mana lihid!
Maxay lambarradu ugu xigaan emoticons-ka?
Ku jawaab Edgar
Waxaan rumeysanahay, sida Ana tiri, in dhinacyada loo wajihi karaa uu yahay qof adiga saaxiibbo kuu ah isla markaana aanad lahayn.
Sida aan qabo, wejiga dhinac waa marka aad qaadatid shaashadaha qofka kale ...
Ku jawaab Maury
Tirada maxay ka dhigan tahay?
Wejiga u eg askance waxay ka dhigan tahay inaad tahay saaxiibkiisa ugu fiican laakiin isagu ma aha kaa !!!
tirooyinka macnahoodu yahay
Ku jawaab margarita
Wajiga yar ee muujinaya labada qaybood ee ilkaha muxuu ka dhigan yahay ????? <—— esaaa !!
Ku jawaab Hania
Wejiga ???? Waxa loola jeedaa?
Oo muxuu ula jeedaa wajiga fiiqan?
Wejiga dhinac u wada jeeda macnaheedu waa qofku wuxuu kugu dhex leeyahay kuwa ugu cadcad laakiin qofkaas kuma lihid dadka aad ugu jeceshahay
Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin qof walba wadashaqeyntiina, waxaan cusbooneysiiyay gelitaanka iyada oo ku saleysan xaqiiqda ah inay jiraan dhowr qof oo macnahooda ku soo aadaya, taas oo iga dhigeysa inaan aaminsanahay inay run tahay (oo sidaan ku arkay waa run nolosha dhabta ah, sidaas ayaa la xaqiijiyay).
Ugu dambeyntiina waxaan arkay inaad weyddiineysaan wajiyo cusub, runtu waxay tahay anigu ma aanan arkin, haddii aad dhajin kartaan shaashadda waxaan bilaabayaa inaan baaritaan ku sameeyo, ha ilaawin inaad la wadaagto maqaalka, wax aan waxba ahayn, laakiin sababtoo ah Waxaan ahaa kii ugu horeeyey Markaan arko iyaga xoogaa waan lumay, tanina waxay dadka ka caawin kartaa inay ogaadaan waxa ay ku saabsan tahay, salaan kalgacal leh dhammaan akhristayaasha ka dhigaya shaqadeenna suuragal! 😀
Waxaan rabay inaan daabaco sawir ku saabsan wajiga oo shaki iga galay laakiin ma awoodo ama ma aqaano sida loo faafiyo
Aad baad ugu mahadsan tihiin inaad doonaysaan inaad wax ku darsataan upload inaad soo rartaan sawirka waxaad ku shubi kartaan "http://www.imgur.com/" ka dibna mar dambe dheji xiriirin halkaan ah, nasiib wacan!
Tirada maxay ka dhigan tahay ?????
Ma helayo dayaxa maxaa yeelay fiidiyowyadu way sii madoobaadaan aniga oo aan rabin
Kuwa weeydiiya wejiga dhoola cadeynaya oo la dabacsan yahay waxay ka dhigan tahay in qofkaasi yahay saaxiibka ugu fiican saaxiibkaa best
Ku jawaab manuela
Ku jawaab Lendechy
Waxaan helayaa dab
Jawaab Kellymar Perez Ramirez
Ma jiraa qof og waxa wejigan ku jira?
Ma jiraa qof sheegi kara macnaha lambarada?
Wejiga yar ee ilkaha? waxay ka dhigan tahay inay wadaagaan isla saaxiibkaa ugu fiican # 1
? labaduba waa # 1 kan kale
? waxay leeyihiin # 1 qof isku mid ah
? Waa asxaabta ugu fiican
? wadaag saaxiib fiican
? waxaad ku jirtaa asxaabtiisa ugu fiican laakiin isagu kuma jiro adiga
? waxay si dhakhso leh u sheekaystaan
Ku jawaab Clari
Sideen uga dhigi karaa bisha-dambe inay ka soo muuqato birta dhinaceeda? Qof baa ii sheega sida loo sameeyo!?
Sideen u sameeyaa waxa luma nuska ahi igu qabsado snapchat.
Lambarada ayaa noqon doona maalmihii aad si firfircoon uhadli jirtay ... taasi waa sababta ay dabka ugu soo baxaan 😉
Waa maxay macnaha wada hadalka cirro leh?
Ku jawaab FER
Iyo wadnaha cas?
Ku jawaab Mig
Dareenkii 89 dijo
Muxuu bilaha u soo muuqan waayey dhiniciisa tooska ah ee snapchatkayga?
Ma jiraa qof og waxa ay tahay 'astaanta cawlku ??
Ku jawaab Erick
Ma jiraa qof garanaya waxa ay astaanta farriinta la diray macnaheedu tahay laakiin midabka cawlan?
Adiga ayaa wadaha gaarigaaga, ma ahan GPS-ka
Waxaan fiirineynaa horumarka mashruuca Spartan